Ciyaar kulul: Sweden vs Germany 4 – 4 | Somaliska
Af-Soomaali / Ciyaaraha / Germany / Sweden
Caawa waxaa ciyaar kulul dhex mari doontaa xulka qaranka ee wadamada Sweden iyo Germany. Ciyaartaan oo ka mid ah isreereebka qaramada ee koobka aduunka 2014 ayaa Sweden waxay foodi isdari doonaan Germany oo aan horay looga soo badin.
Xulka Sweden ayaa ku tashanaya ciyaartoyga caanka ah ee Zlatan Ibrahimovic, halka qaranka Germany ay awooda saarayaan isaga oo keliya. Tababaraha Germany ayaa warbaahinta u sheegay in xulkiisu ay boos u diidi doonaan Ibrahimovic, isaagoo ku tilmaamay nin khatar ah.
“Waa nin khatar ah oo ciyaaraha keligiis wax ka badali kara. Balse haddii aan ku socono kalsoonida iyo baaska wanaagsan waxaan aaminsanahay in aan ka fursad fiicanahay Sweden” ayuu yiri tababaraha Germany Joachim Loew.
Ciyaartii u dambaysay ee Sweden ay la ciyaartay jasiirada Faroe ayay ku sigteen guul daro, inkastoo daqiiqadii 75 uu Zlatan guusha u soo hooyay. Ciyaartaas ayaa qaasatan waxay tusaale u tahay awooda Sweden marka loo barbar dhigo Germany oo ka mid ah kooxaha ugu wanaagsan kubada cakta ee aduunka.
Ciyaarta caawa ayaa noqon doonta mid xiiso leh oo ay daawan doonaan inta badan shacabka Sweden. Ciyaarta ayaa ka dhici doonta caasimada Germany ee Berlin oo waxay soo gali doontaa 20.45 iyadoo laga daawan doono TV5.
Ma laga yaabaa Sweden in ay ka guulaysato Germany? Fikradaada iyo qiyaastaada ku darso…
CUSUB: Sweden ayaa si lama filaan ah ku bareejaysay Germany iyagoo afar gool lagala hormaray. Ciyaarta ayaa ku dhamaatay 4-4
cawa inshlah sweden wey guuleysan doonta zlatan ayana guusha ku hogamin doona inshalah
Swedan wey guuleysneysaa in sha allah waayo swedan waa wadankeega labaat guul ayaan ku rajeynaya zlatan
ilamaha aha germany ciyaartooy ayeey lee yihin sween ayad ma, hayso hal qofna wax ma, u qaban karo sxbyaaaaaaaaaaaaaaaal
saadasha ciyaarta cawa ayaa waxaa la saadaalinaayaa in ay jarmalku kaga badiyaan swweden 5—— 0) halka ay swedeshku ku hamiyaayaan in ay ebarka uun ka baxaaan oo halgoolna ale haka yeelee wax uun la shir yimaadaaan balse taasi inay dhacayso loo malayn maayo…….OBS! rag Agtayda fadhiya oo ku taqa suusay ciyaaraha ayaa sidaa saadaliyey. waxaynu sugnaaba waa saacado daawasho wacan.
sweden dhulkaa lala dhacay caawa meesha garmal ayaa marayaa kkkkkkkkkkkkkkkk viva garmani
runtii cayaarta sweden waa loo baqaa meeshana waxba kuma hayso Germany viva
mnsha allh waa Gul nosoo hoyatay hadad nahay reer swedan waxa farxad weyn noo ah in 4 nalaga hor maray hadana meesha bareej ey ka dhacday mnsha allh caadi ma ahan ( zalatan) viva farever